1. Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
“Bangcwelise ngeqiniso lakho: izwi lakho liyiqiniso” (UJohane 17:17).
“Waphendula futhi wathi kubo, UIsaya waprofetha kahle ngani bazenzisi, njengalokhu kulotshiwe, Laba bantu bangidumisa ngezindebe zabo kodwa inhliziyo yabo ikude nami, Nokho, bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Ngoba, ngokuyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu, njengokugeza amabhodwe nezinkomishi: kanye nezinye izinto eziningi ezinjalo enizenzayo. Futhi wathi kubo, Nichitha umyalo kaNkulunkulu, ukuze nigcine isiko lenu. … Nenza izwi likaNkulunkulu libe yize ngesiko lenu, enilivezileyo: futhi nezinye izinto eziningi ezinjalo niyazenza” (UMarku 7:6-13).
Iqiniso alina ndlela, noma umthetho wokulenza. Alifile—liwukuphila, liyinto ephilayo, futhi kuwumgomo ukuthi isidalwa kumele sililandele futhi umgomo abantu okumele babe nawo empilweni yabo. Lokhu yinto okumele uyiqonde kakhulu ngokwenzekile. Noma ngabe ufike kuliphi izinga ngokwesipiliyoni sakho, awuhlukaniseki nezwi likaNkulunkulu noma iqiniso, futhi nalokhu ukuqonda ngesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu okwaziyo ngalokho uNkulunkulu anakho nayikho, konke kubonakala emazwini kaNkulunkulu; kuxhumene ngendlela engenakuhlukaniswa neqiniso. Isimo sikaNkulunkulu kanye nalokho anakho nayikho, ngokwakho kuyiqiniso; iqiniso liwukubonakaliswa kwesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho. Lenza lokhu uNkulunkulu anakho nayikho kuqine futhi ukusho ngokugcizelela; likutshela ngqo ukuthi uNkulunkulu uthandani, yini angayithandi, yini Afuna ukuba uyenze futhi yini angayivumeli ukuba uyenze, ibaphi abantu abenyanyayo futhi ibaphi abantu athokoza ngabo. Emva kweqiniso uNkulunkulu alishoyo, abantu bangabona ukwenama, intukuthelo, usizi, nentokozo, kanye nengqikithi Yakhe—lokhu ukwambulwa kwesimo Sakhe.
Yonke into uNkulunkulu ayenzayo iyiqiniso nokuphila. Iqiniso le sintu kuyinto abangeke bayiswele ezimpilweni zabo, ngeke baphile ngaphandle kwayo; ungasho futhi ukuthi iyonanto enkulu kakhulu. Noma ungeke wakwazi ukuyibona, noma ukuyithinta, ukubaluleka kwayo kuwe ngeke ukuzibe; iyonanto kuphela engaletha ukuphumula enhliziyweni yakho.
“Ukubukeza kwakho iqiniso” empeleni akwenzelwa ukwenza abantu bathole ukuphila noma bathole izinguquko ezimweni zabo. Kunalokho, kwenziwa ukuze abantu bafunde ulwazi nezimfundiso ezithile ezingaphakathi eqinisweni. Babonakala sengathi bayayiqonda inhloso engemuva komsebenzi kaNkulunkulu, ngesikhathi empeleni befunde kuphela amazwi athile emfundiso. Abawuqondi umqondo ocashile weqiniso, futhi akwehlukile ekufundeni imfundiso yenkolo noma ukufunda uBhayibheli. Uqoqa lezi zincwadi noma leyo mibhalo, bese uba nale ngxenye yemfundiso noma leyo ngxenye yolwazi. Uyisikhulumi esisezingeni eliphezulu sezimfundiso—kodwa kwenzekani uma usuqedile ukukhuluma? Abantu khona-ke abakwazi ukuzwa, abanakho ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu futhi abanakho ukuziqonda kwabona. Ekugcineni, zonke izinto abayobe bezizuzile yizindinganiso zokwenza nje nemithetho, futhi bangakhuluma ngalezo zinto kodwa hhayi okunye. Ukuba uNkulunkulu wenza okusha, bekungenzeka ukuthi zonke izimfundiso ozaziyo zilingane nalokho uNkulunkulu akwenzayo? Ngakho, lezo zinto zakho ziyimithetho nje, futhi wena wenza nje abantu bafunde imfundiso yenkolo: Awubavumeli ukuba bahlangane nezwi likaNkulunkulu noma bahlangane neqiniso. Lezo ncwadi eziqoqwa abantu zingabaholela kuphela emfundisweni yenkolo kanye nolwazi, ezindinganisweni zokwenza kanye nemithetho namasiko. Azikwazi ukuletha abantu phambi kukaNkulunkulu, noma zivumele abantu ukuba baqonde iqiniso noma ukuqonda intando kaNkulunkulu. Ngokubuza umbuzo emva komunye ngalawo mazwi, bese uphendula, wakha uhlaka noma iqoqo lokubalulekile, ucabanga ukuthi labo abangaphansi bangakwazi kalula ukuwaqonda. Ngaphandle kokuba lula ukuwakhumbula, bayacacelwa ngale mibuzo bewabuka nje, futhi ucabanga ukuthi kuhle ukwenza izinto ngale ndlela. Kodwa lokho abakuqondayo akuyona incazelo ecashile yangempela yeqiniso; kuyehluka kokungokoqobo futhi kungamazwi nje emfundiso. Ngakho bekuyoba ngcono ukuba awuzenzanga nhlobo lezi zinto. Wenza lezi zinto ukuholela abantu ekuqondeni ulwazi futhi bafunde ulwazi. Ungenisa abanye ezimfundisweni, enkolweni, futhi ubenze balandele uNkulunkulu futhi bakholwe kuNkulunkulu ngaphakathi kwezimfundiso zenkolo. Awufani-ke nje noPawulu? Ucabanga ukuthi ukufunda ulwazi lweqiniso kubaluleke kakhulu, kanjalo futhi nokufunda ngenhliziyo iziqephu eziningi zamazwi kaNkulunkulu. Kodwa ukuthi abantu baliqonda kanjani izwi likaNkulunkulu akubalulekile neze. Ucabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuba abantu bakwazi ukubeka ekhanda amazwi kaNkulunkulu amaningi, ukwazi ukukhuluma imfundiso eningi nokuthola izindinganiso zokwenza ngaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu. Ngakho-ke, nihlala nifuna ukuhlela lezi zinto ukuze wonke umuntu acule ekhasini leculo elifanayo futhi besho izinto ezifanayo, ukuze wonke umuntu akhulume izimfundiso ezifanayo, abe nolwazi okufanayo futhi agcine imithetho efanayo—lokhu kuyinhloso yenu. Nenza lokhu kube sengathi nenza abantu baqonde kangcono, lapho kokuphambana nalokho ningazi ukuthi ngokwenza lokhu ningenisa abantu phakathi kwemithetho engaphandle kweqiniso lamazwi kaNkulunkulu.
Kucashunwe embhalweni othi “Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu
Uma nilifunde kakhulu izwi likaNkulunkulu kodwa niqonda kuphela okubhalwe kulo, ningenalo ulwazi ngezwi likaNkulunkulu ekuphileni kwenu okungokoqobo, ngeke nilazi izwi likaNkulunkulu. Ngokwenu, izwi likaNkulunkulu alikhona ukuphila, kodwa liyimibhalo efile. Futhi uma ugcina ngokubambelela emibhalweni efile, ngeke uyiqonde ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, futhi ngeke uyiqonde intando Yakhe. Incazelo kamoya yezwi likaNkulunkulu kuwe iyocaca kuphela lapho uqaphela izwi Lakhe ezintweni odlula kuzo, futhi incazelo yokomoya ngamaqiniso amaningi ungayibamba kulezo zinto kuphela odlula kuzo, futhi yizinto odlule kuzo ezingakukhanyisela izimfihlakalo zezwi likaNkulunkulu. Uma ungalenzi, akunandaba ukuthi izwi Lakhe licace kangakanani, okuwukuphela kwento oyibambile nje amagama nezimfundiso eziyize, eseziphenduke imithetho yenkolo kuwe. Akuyona yini lena into eyenziwa abaFarisi? Uma nilenza futhi nilizwa izwi likaNkulunkulu, liba yinto engeyoqobo kini; uma ningafuni ukulenza, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu kini lithi alifane nenganekwane yezulu lesithathu. …
… Abantu abaningi baneliswa nje ukumane baqonde umbhalo wezwi likaNkulunkulu bese begxila ekuzihlomiseni ngezimfundiso kunokujulisa abakuzwayo ekwenzeni, kodwa akuyona yini leyo indlela yabaFarisi? Ngakho inkulumo ethi “Izwi likaNkulunkulu liwukuphila” ingaba kanjani yiqiniso kubo? Ukuphila komuntu kungeqhakaze kuphela lapho umuntu efunda izwi likaNkulunkulu, kodwa uma enza likaNkulunkulu. Uma nikholelwa ekuthini ukuqonda izwi likaNkulunkulu kwanele ukuze umuntu abe nokuphila nesiqu, kusho ukuthi ukuqonda kwenu kuphambene. Ukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu kwenzeka lapho wenza iqiniso, futhi kumele uqonde ukuthi “iqiniso ungaliqonda kuphela ngokuthi ulenze.”
Kucashunwe embhalweni othi “Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule: 3. Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu
Okulandelayo: 2. Kungani iqiniso elichazwa nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina likwazi ukuhlanza umuntu, limphelelise umuntu futhi libe yimpilo yomuntu?
(1) Ukubaluleka kokuba uNkulunkulu ethatha igama likaJehova Ngenkathi YomthethoIzikhombo Zamavesi EBhayibheli:“UNkulunkulu wathi futhi...
4. Ayikho indlela yokuphila okungunaphakade ngaphakathi eBhayibhelini; uma umuntu ebambelela eBhayibhelini futhi alikhonze, lapho-ke ngeke akuthole ukuphila okungunaphakade